editor — Sat, 09/23/2017 - 14:04
कम पीडा र औडाहा भयो होला प्रथम अक्षर निर्मातालाई ? यो अगम्य साथै अबोध्य छ । केवल कल्पना गर्न सकिन्छ वास्तविकता छिचोल्न सकिन्नँ ।
आफूले खोजेर जिज्ञासाको अँध्यारो गर्तबाट निकालेको अक्षरलिपि प्रयोगको खुसीमिश्रित भाव र संसारलाई देखाउँने उत्कण्ठ अभिलाषा कस्तो थियो होला ? यो पनि अपरिमित छ । जसले, जसरी, जहाँ र जहिले अक्षरको श्रीगणेश गरेको होस् उसलाई आफ्नो त्यो चेतनाको बाली काट्न र समाजले विश्वास गर्ने बनाउँन कम्ती खुन पसिना खर्चिनु परेन होला ?
कवितामा जेष्ठ नागरिक
editor — Sat, 09/23/2017 - 13:55
प्रेम ओली ढकलपुरे
महान पर्व दशैंको अव्सर पारेर आरम्भ साहित्य स्रिङ्गखलाले “कवितामा जेष्ठ नागरिक” शिर्षकमा काव्य सभा गर्यो ।
युवा कवि देखी जेष्ठ कविबरसम्मको जमघटमा सबै कविले परिवर्तनशील नेपाली समाजमा जेष्ठ नागरिक प्रतिको उदासीनताप्रति ब्यङ्ग्य गर्दै सामाजिक जनचेतना जगाउने खालका गीत, गजल, मुक्तक र कविताहरू पस्केका थिए ।
editor — Tue, 09/19/2017 - 04:25
अनुदानको नून खान्छौ
अनुदानकै औषधीले बाँच्छौ
आयातित चुल्हो किन्छौ
आयातित ग्याँस बाल्छौ
आयातित तेल हाल्छौ
बिदेशी ब्रुसमा बिदेशी मन्जन
ङिच्च हाँस्छौ पिच्च थुक्छौ
र कुल्ला गर्छौ
नाम, बदनाम र गुमनाम
editor — Tue, 09/19/2017 - 04:21
नाममा वासना छ । नाममा शासना छ । नामको निम्ति मान्छे अन्धो हुन्छ । विवेकका आँखालाई तर्पण दिन्छ । हिजोसम्म मामदामको कुनै जोहोतोहो नभएको मानिस मामदामको कुरुस्त व्यवस्था मिलिसकेपछि नाम कमाउने भोकमा तड्पिएको छ । लाग्छ ऊ नाम कमाउने अन्धो धुनमा शरीरको रक्तचाप बढाइरहेको छ । काम, माम र दामको वर्तुल घेरामा सीमित हुँदारैनछन् मान्छेका चाहनाहरू । माम र दामपछि जसलाई पनि नामको भोक लाग्छ क्यारे ।
अपूरा सपना बिथोल्ने बिहान
editor — Tue, 09/19/2017 - 04:14
अपूरा सपना बिथोल्ने बिहान जो छ
यही माटोले दिएको पहिचान जो छ
नानाभाती भन्ने मुख छ यस्तै त्यस्तै
नपुङ्सक विचार सुन्ने कान जो छ
दशै तिहार आकै हो त
editor — Tue, 09/19/2017 - 04:05
बच्चाहरू चंगा किन्दै थिए बजारमा, दशै तिहार आकै हो त ?
खसीको मूल्य हुँदै थियो बजारमा, दशै तिहार आकै हो त ?
बिहानको सिरर चिसो हावा, पारिजातको वासना उस्तै
भरपुर बसाउन थालेको छ, दशै तिहार आकै हो त ?
editor — Sat, 09/16/2017 - 23:50
एक दिन डिउटी सिध्याएर कोठातर्फ जाँदै थिएँ, सुराकी ‘इ’ बन्दीकोठाको झ्यालमा उभिएर सानो ढुङ्गा खेलाइरहेको रहेछ । मैले उसलाई देख्नेबित्तिकै आँखा घुमाएँ । आफ्नो कोठातिर बढदै थिएँ मेरो ढाडमा कुनै चीज आएर ट्वाक्क ढोक्कियो । फर्केर हेर्दा त्यही सुराकी ‘इ’ले खेलाइरहेको ढुङ्गाजस्तो लाग्यो । मेरा आँखा सुराकी ‘इ’ कहाँ पुगे । उसले डिच्च गिजा देखाउँदै मलाई आफूकहाँ आउन सङ्केत गर्यो ।
तिमीलाई प्रश्न (गजल)
editor — Sat, 09/16/2017 - 23:43
जे. आर. आभास
नाता थाहा छैन बोलाउँ को भनी ?
व्यथा यो मनको सुनाउँ को भनी ?
जिन्दगीको यात्रामा साथ चाहिन्छ
साथ दिने हात समाउँ को भनी ?
editor — Sat, 09/16/2017 - 17:46
"बैनीको दया छ भने रोदीघर दाइ नाच्यो नभने ।"
बिर्खबहादुरले हातमा बोकेको रेडियोबाट यो गीत घन्किदा सुक्रबरे हाट नै रिमझिम भएको छ । सेतो पैन्ट, फूल्बुटते कमिज, घाटीमा सानो चिटिक्क परेको रुमाल, हातमा घडी र रंगीन चस्मा लगाएको र आफूले भिरेको फोनमा नेपाली र हिन्दी गीतहरू सुनाउदै बिर्खबहादुर आज सुक्रबरे हाट भर्न आएको छ । दस वर्षपछि लाहुरे भएर फर्किएको बिर्खबहादुरको फुर्तिले गाउँका तरुनीहरू 'लाहुरे दाइको जोवन नै राम्रो' भनेर गिज्याउन थालेका छन् ।
एकदेव — Thu, 09/14/2017 - 19:35
सामान्य लाज ढाक्ने पहिरनमा बैशाखी टेक्दै ऊ त्यहाँ आइपुग्यो।
उसका आँखाहरू उसको अगाडि राखिएको कन्टेनरमा थियो। सायद ऊ कुनै चिजको प्रतिक्षामा थियो। उसको पिठ्युँको थोत्रो बोराभित्र सायद अनन्त कथाहरू लुकेका थिए।
Gokul Khadka — Thu, 09/14/2017 - 13:56
बाल सूर्य जस्ता साना ज्ञानी नानी
फुल बन्ने तरखरका कोपिला हामी !
बाबा आमा सबैका हुन्छौं हामी ज्ञानी
सानै देखि लिएका छौं राम्रो बन्ने बानी !
धरापमा पर्न आँटेको बन्द, हड्ताल व्यवसाय
HomSuvedi — Wed, 09/13/2017 - 17:12
मैलै कतै जानु पर्दा अहिले निकै सजिलो भएको छ । कहाँ कुन पार्टीको हड्ताल छ, कहाँ कुन व्यवसायी, समाज, संगठन, मुक्तिमोर्चा आदि कसकसले कहिले चक्काजाम गर्दैछन् भनेर थाहा पाउने मेरो सजिलो साधन छ भद्रे भाइ । ऊसँग यस फेटको हडतालको क्यालेन्डर नै हुन्छ । ऊ मेरा छिमेकी पनि हो । मेरा मामा खसेकोले सखारै गाडी चढेर मलामा जानु पर्ने भएकाले र गाडी चल्ने नचल्ने बुझ्नलाई एकाबिहानै म भद्रे भाइकोमा गएँ । ऊ बिहानैदेखि राँकोका लागि तयारीमा रहेछ । ऊसँगै दुई जना भाइहरू पनि भाटा खुर्किरहेका रहेछन् ।
सार्वभौम स्वदेश र कुटो कोदालो
bheshraj71 — Wed, 09/13/2017 - 09:26
तिमी ठूलो मान्छे हुनुपर्छ
यी किताब कलम समाऊ
मलाई अक्षरहरुप्रति घृणा छ
युद्ध सामग्री खेलाऊ
नेपोलियन, सम्राट अशोक बन्न सक्छौ
प्रजातन्त्र, समाजवाद, मानव अधिकार
भोकाहरुलाई बाँड्ने सपना हुन्
जुन कहिल्यै दिनुपर्दैन
यसको पनि सहारा लेऊ
अब अर्को चुनाब नआओस्
केडी रेम्नीसीङ — Mon, 09/11/2017 - 21:48
हो रहेछ दाइ, त्यसैले म चाहिं यो पाली चुनाबमा तटस्थ बस्छु ।’ नबुङहाङको कुरा सुनेर पिईराखेको चियाको गिलास उठाउँदै बागेमान बोले, ‘होइन किन नि? कसरी थाहा भयो? यो पाली त हाम्रै दाइलाई उठाउने हो जिताउनलाई त हामी चुप लागेर हुन्छ र?’ तानेको एक सुरुप चियामा हावा मात्र आएकोले नबुङले गिलास हेरे, चिया सिद्धिसकेको रहेछ । क्याफेको साहुनीलाई चिया थप्ने ईशारा दिदैं नबुङ बोले, ‘अस्ति विद्यार्थी संगठनको चुनाबमा हुनुसम्म भयो नि, समुदायको केही हित गर्न सकिन्छ कि भनेर सचिव पदमा वसेको सुर्वा कल्याणकारी समाज पनि चुनाबमा यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्ने हुँदा विग्रिराखेको छ । फूटाऊ र शासन गर भन्ने भनाई कतै सुनेको थिएँ, ठ्याक्कै त्यस्तै भयो । प्रत्येक पार्टीले हाम्रो समुदायको कोही न कोही अगाडि बढाएकै हुँदो रहेछ । पार्टीले गर्दा यो पाली जाति पनि ती टुक्रा भयो ।’
नसके नि आकाशका ताराहरू
दुई मुक्तक (यहाँ छ)
अतित बनि गयौ
म के जाति ?
अरुको गुलामी नगर साथी
उज्यालोमा देख्दिन आफुलाई, अँध्यारोमा हराउँछु त्यसै
केउ प्रेम करे हमरा (कविता)
सितार सम्राटबारे दुई शब्द
पागल पनि हुन्छ माया र प्रेम
कमजोरी समाजक आओर शैक्षिक जगतके !
जिन्दगी को परिभाषा
जीवनका छालहरू नियाल्दा
मेरा प्यारा जून मामा !
इजरायल–गाजा युद्ध, मेरो मानसपटलमा
२०६७ को साझा पुरस्कार दुबसु क्षेत्रीलाई
यी बग्रेल्टी समस्याको